Maitiro ekutora masikirini pazera rechina Apple TV | IPhone nhau
Maitiro ekutora masikirini pazera rechina Apple TV
Iyo itsva Apple TV inovimbisa maawa akanaka ekunakidzwa, kwete chete nekuda kwemultimedia zvemukati izvo zvinotibvumidza isu kuti titambe, asiwo nekutenda kunyorera nemitambo iyo iyo inotibvumidza isu kuti timise zvakananga pane yedu kifaa. Zvakare nekutenda kune mukana we wedzera mapadhi emitambo kuti unakirwe neyedu mitambo yatinofarira pascreen hombe mumba medu. Dzimwe nguva, chero chikonzero, isu tinogona kufarira kutora skrini yemufananidzo uri kuratidzwa panguva iyoyo.
Kubata neiyo iPhone, iPad kana iPod Kubata kuri nyore sekusimbaradza mabhatani epamba uye ekuzorora kwechipiri chechipiri kuti mudziyo upindure nezwi revhavha yekhamera inofungidzira. Panguva iyoyo, kubatwa kwacho kunenge kwave kugadzirwa uye kuchichengetwa chaiko pane reel yechigadzirwa chedu. Asi paApple TV, zvakaomarara kupfuura zvese izvo, sezvo tichifanira kutendeukira kune X-kodhi kana iyo yekukurumidza kushanda uye batanidza chishandiso kuMac yedu kuti ugone kuzviita zvinobudirira.
1 Maitiro ekubata pane yechina chizvarwa Apple TV
Maitiro ekubata pane yechina chizvarwa Apple TV
Isu tinoisa Xcode paMac.
Isu tinobatanidza Apple TV kune Mac yedu kuburikidza neUSC-C kubatana. Ipo mudziyo uchinge wakabatana neMac zvakare inofanirwa kuve yakabatana neterevhizheni kuburikidza neiyo HDMI kubatana.
Isu tinovhura Xcode.
Tinodzvanya pamidziyo uye tinosarudza Apple TV.
Ruzivo pamhando yechigadzirwa chatakabatanidza chinozoratidzwa mukoramu yekurudyi, mune ino chizvarwa chechina Apple TV. Kuti uite kubatwa, tinya pa Tora Screenshot kana zvirimo zvinotorwa zvichiratidzwa paTV skrini.
Isu tinobatanidza Apple TV yedu kuMac.
Isu tinovhura QuickTime uye toenda kuFaira> Nyowani skrini yekurekodha.
Isu tinosarudza iyo Apple TV sechinhu chekushandisa.
Zvemukati meApple TV irikutamba zviratidzwa pachiratidziro che QuickTime. Iye zvino isu tinongodzvanya Command + Alt + 3 kuti titore iyo yakazara skrini yeMac yedu kana Command + Alt + 4 kutora chikamu kutorwa kwechidzitiro cheMac yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekutora masikirini pazera rechina Apple TV
Yakawanda sei kuongororwa kweappletv4 functionalities?
Ndine kukahadzika kwakawanda kugadzirisa, zvinoita kunge chinhu chakakura
Tsigiro yePlex, DLNA, NAS server?
Dhata yekupinda sisitimu, izwi kududzira, pane-skrini keyboard, bata ruoko pane iyo kure?
Ndezvipi zvinongedzo, controller, keyboard mbeva nezvimwe ...
Unogona kuisa pendrive yekutamba zvemukati
Internet inodikanwa kutumira zvemukati kubva kune smartphone kuenda kuappletv, enda senge fucking chromecast yausingakwanise kuitora pazororo pasina internet.
Tsigira yekunze hard drive nezvimwe ...
Mhoro nauronic08. Pachave nekuongororwa, asi ini ndinofunga zvirinani kumirira kwechinguva uye kuzviita kanenge pasvondo. Pakahadzika dzako, ndinogona kujekesa zvimwe zvacho:
-Hapana bhurawuza, zvirinani zvenguva. Ndinoda kuona zvimwe, chaizvo.
-Plex ichave, vanogadzira vataura. Ini handizive kana yatove.
-Kunyora, izvozvi chete ari kure anoshanda uye kwete nezwi. Ndokunge, kana iwe uchifanira kunyora mubhokisi rebhokisi, iwe uchafanirwa kushandisa iyo Siri Remote, uchitsvaga mavara uye nekudzvanya paari. Mune zvimwe zvinoshandiswa, kungoisa tsamba kunozoonekwa
-Iyo haina pendrive. Iyo ine USB-C chiteshi, asi ini ndinofungidzira isu tinogona kuita chero chinhu kubva ipapo. Zvisinei, ichafanirwa kuyedzwa.
-Right izvozvi inongotsigira chete vanodzora mutambo uye Siri Remote, kana ndikarangarira nemazvo. Tsigira MFi zvinodzora.
-Kana ichida internet kana kwete, ini handizive, ini handina kuzviedza uye nhasi handichakwanise kuzviyedza.
-External dhiraivha, yakafanana nependrive. Ini handina chokwadi nazvo, asi isu tichafanirwa kuyedza kuibatanidza neUSB-C uye tione zvazvinoita, kana ikaonekwa muchikamu che "makomputa" (ndinofunga inonzi iyo, iranjisi, asi handicharangarira zita izvozvi ).
Nyowani WhatsApp yekuvandudza inokutendera iwe kupindura mafoni neshoko
Lumino Guta, adventures uye mapuzzle pane yako iPhone